Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley oo raadinaya siduu u badbaadin lahaa eedadii oo lagu eedeeyay inay soo booqatay sarkaal sare oo ONLF ah !!
Cabdi Iley oo raadinaya siduu u badbaadin lahaa eedadii oo lagu eedeeyay inay soo booqatay sarkaal sare oo ONLF ah !!
Jahawareerka haysta kooxda Jigjiga uga arimisa gumaysiga oo maalinba heer soo taagnaa ayaa usbuuc ka hor waxay maxaysatada Hawaarintu (Liyu Bolisku) xabad ku dhufteen nin waalan oo laga yaqaano magaalada laguna magacaabo Weeyjeex isagoo markaas hormarayay wadada horumarta guriga u galo Cabdi Iley. Waxaa ninkii oo dhaawac ah la dhigay Isbitalka Karamardha ka dibna halkaa ayaa lagu xidhay.
Waxay Liyu Bolisku yidhaahdeen waxaan tooganay sargaal sare oo ururka ONLF ka tirsan, kadibna Cabdi iley eedadii Marwo oo Isbitalka ku booqatay ninkaas walan ee la toogtay ayaa la soo xidhay waxaana loo diyaarinayaa xukun 10 sano ah. Waxaa Marwo lagu eedeyay in ay soo booqatay sarkaal sare oo ururka ONLF ka tirsan dhaawciisii.
Waxay la yaaban yihiin dadweynaha Jigjiga wareerka haysta Itobiya iyo gacanyaraha u jooga halkaa oo Weeyjeex oo labaatan sano waalaa oo layaqaano maanta ku doodayaan waxaan dhaawacnay oo aan qabanay sargaal sare oo ONLF ah oo doonayay in uu qarxiyo guriga Cabdi Iley. Wuxuu intaa raaciyay qofka nooga soo diray warkan Jigjiga; Nin dakane galay wax walba wuu ka baqan. Hoyadii Figeeyow maxaad fa’iiday adigu?